စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်းအော်တို Recovery ကိုအနိမျ့ကို Maintenance တံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Rolling အော်တို Recovery ကိုတံခါး,အစာရှောင်ခြင်းဇစ် Flexible တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း,Rapid ဖျ Recovery ကို Shutter တံခါးဈေးနှုန်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > self-Recovery ကို Rapid တံခါး > စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်းအော်တို Recovery ကိုအနိမျ့ကို Maintenance တံခါး
မော်ဒယ်နံပါတ်။: HF-J 310
self-ပြုပြင်မြန် Rolling Up ကိုတံခါးမြန်နှုန်းမြင့် partition ကို function ကိုနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းတံခါးသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးတံခါးကို frame ကိုအကြီးစားလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်အားဖြင့်ဖြတ်သည်နှင့်လမ်းညွှန်ရထားလမ်းသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကစက်မှုရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှု၏လယ်ပြင်ထဲမှာအဆင့်မြင့် servo နည်းပညာချမှတ်: လက်ရှိ, အနေအထားနှင့်မြန်နှုန်းသုံးခု-ကွင်းဆက် Full-တံခါးပိတ်ကွင်းဆက်နည်းပညာ။ ဒါဟာ 150,000 နှစ်ပေါင်းဒုက္ခ-အခမဲ့ခွဲစိတ်သေချာမြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရ, အလေ့အကျင့်, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။ အောက်ပါမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပျမ်းမျှနေ့စဉ်အချိန်, 500 ကြိမ်ထက်လျော့နည်းသည်:
1. တံခါးခန္ဓာကိုယ်အလယ်၌တစ်ဦး PVC ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်နဲ့ 0.8-1.0mm ထူပြင်သစ် High-density ကို PVC အခြေစိုက်စခန်းထည်ဖြစ်ပါတယ်။
2. တံခါးဘောင်ပစ္စည်း 2.0mmSUS304 သံမဏိပန်းကန်ဖွဲ့စည်းပုံ, အရည်အသွေးမြင့် Anti-ချေးကုသမှုသို့မဟုတ် 3.5mm အထူ Anti-ဓာတ်တိုးအရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံအလွိုင်းကော်လံဖြစ်ပါတယ်။
3. မြန်နှုန်း 0.3-2.0 m / sec
ကုလားကာအရောင်: (ဥပမာအနီ, အဝါ, အပြာ, အဖြူ, ငွေနှင့်ပွင့်လင်းအပြည့်အဝ) မှရှေးခယျြဖို့စံအရောင်များအမျိုးမျိုး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PVC မြန်နှုန်းမြင့် roller တံခါးကိုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဘာတွေလဲ?
အဆိုပါအီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်က reserved သည်အနီအောက်ရောင်ခြည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုခလုတ်, geomagnetic သော induction switch သည်, ရေဒါ senor switch ကို, ကြိုး switch ကို, အဝေးထိန်းခလုတ်, နှစ်ဆတံခါးကို interlock, ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အခြားအချက်ပြမျက်နှာပြင်အသွင်ပြောင်း engoneering နှင့်သို့ switch ကို signal ကိုကွန်နက်ရှင်ချမှတ်ရာတွင်အသုံးပြု commoly, အလွန်အကြာတွင်အသွင်ပြောင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ဖက်တဲ့။
Automatic, စူပါအစာရှောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲ, အပူနှင့်လေထု၏ယိုစိမ့်လျှော့ချ, အပူထိန်းသိမ်းခြင်း, ကျန်းမာရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PVC panel ကလှပ, အမျိုးမျိုးသောအရောင်တွေရရှိနိုင်ပါ။
အစားအစာစက်ရုံများအတွက်အထူးသဖြင့်မထိုက်မတန်စက်ရုံများအမျိုးမျိုးတို့ကို၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်တံခါးများ, အအေးသိမ်းဆည်းခြင်း, မကြာခဏထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း
1. ဇစ်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကို - ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု
2. ဇစ်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကို - ရေဒါအမျိုးအစား
3. ဇစ်အမြန်တံခါးကို - photoelectric အမျိုးအစား
4. ဇစ်လျင်မြန်စွာတံခါး - Button ကိုအမျိုးအစား
5. ဇစ်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကို - drawstring အမျိုးအစား
6. ဇစ်လျင်မြန်စွာတံခါး - Geomagnetic အမျိုးအစား
7. ဇစ်လျင်မြန်စွာတံခါး - Interlocking အမျိုးအစား
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Rolling အော်တို Recovery ကိုတံခါး အစာရှောင်ခြင်းဇစ် Flexible တံခါးတပ်ဆင်ခြင်း Rapid ဖျ Recovery ကို Shutter တံခါးဈေးနှုန်း မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းစက်မှု Recovery ကိုတံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Rolling Up ကိုတံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းအထည်အလိပ်တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC Roll Up ကိုတံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းအထည်အလိပ် Shutter တံခါး